Ingxowa-mali yomvikeli wentando yesininzi yaseThai-siyitshitshisa ubukhosi e Thailand
06 Ngamana 2020
6. Meyi 2020 Oliver Bienkowski
Ingxowa-mali yokukhusela inkululeko yaseThai - siyabuphelisa ubukhosi eThailand
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 6. Meyi 2020
Khetha ulwimi lwakho:
Nceda usebenzise idilesi yethu yomnikelo: paypal@pixelhelper.tv ngeminikelo.
Ibhola ekhatywayo ehamba ze. Inkosi yaseThai ithatha uxanduva kwiprojekthi yeXXSoccer evela kuPixelHELPER. Kumdlalo wokuqala, amanenekazi akhe angama-26 avela kwindawo yabafazi ayakhuphisana ngokuchasene, uRama X. ngusompempe, ookumkanikazi bakhe babini bakora. Ngoku sikhangela ibala lebhola ekhatywayo, iindleko zokulungisa kunye nokusasaza umdlalo kwindawo ehamba phambili. Sixhase kule fomu yenkxaso:
#Sextourist I-Ambassia yaseThailand Lightart
24 มิถุนา Thaiน เป็น วัน ประชาธิปประชาธิปตต
Incoko yokuyeka emsebenzini iKing of Thailand
Isondo sentando yesininzi asimisi. Itshantliziyo elaziwayo uJunya Yimprasert ovela kwi-ACT4DEM kunye nomseki we-PixelHELPER u-Oliver Bienkowski wajoyina imikhosi kwaye wadibana kwindlu yokukhusela amalungelo abantu ePixelHELPER eJamani, ukucwangcisa ubugcisa obutsha kunye nemiboniso yenguqu yenkqubo eThailand.
[gallery_bank type = "imifanekiso" format "" masonry "title =" true "desc =" false "responding =" true "display =" selected "no_of_images =" 17 ″ sort_by = "random" animation_effect = "bounce" album_title = " eyinyani "i-albhamu_id =" 22 ″]
Imvukelo yedemokhrasi ikhanya kwiBundestag, yipalamente yomanyano. Siyabongoza urhulumente waseJamani ukuba aqalise amanyathelo okugxotha inkosi eJamani. Abantu baseThailand kufuneka bavukele, babususe ubukumkani kwaye babambe unyulo olukhululekileyo lwentando yesininzi.
Ufuna ukusixhasa? Nceda usebenzise ii wallets zethu zedijithali
I-PixelHELPER ngumbutho ongenzi nzuzo uthatha inyathelo lokugweba okusesikweni kwehlabathi, ngakumbi kumalungelo oluntu, inkululeko kunye nokulingana, kunye noncedo loluntu.
Ukucinga inyani. Akukho bulungisa emva kweminyaka eli-10.
Sigqibe kwelokuba sithathe amanyathelo okuqhanqalaza ngokuchasene nokumkani waseThai, ohlala eJamani, kuba asinakuvumela inkosi enembali yokuziphatha gwenxa ukuba izuze inkululeko nenkululeko eJamani ngelixa iphanga ilizwe lakhe.
Inguqulelo yesiJamani yale ikwiividiyo ze-RTL kunye neBild, siyitshintsha ngeeyure ezingama-24 ezizayo
Siza kuqhubeka nezenzo zethu ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanywa nesicelo kumagunya aseBavaria sokurhoxisa imvume yokuba inkosi ihlale apho. Siza kuqhubeka sihamba de abuyele eThailand kwaye ajongane nabantu baseThai.
Uqhankqalazo lwethu olukhanyayo kwiGrand Hotel Sonnenbichl sisiqalo nje somzabalazo wethu ukwenza inkosi iphendule kubantu baseThailand. Sifuna inkxaso yakho, nceda unikele kwiphulo lethu.
UThais elwela inkululeko kunye nenkululeko yokuthetha axhasa iqela lamazwe liphela iPixelHELPER Foundation ukumilisela iphulo lokuqhankqalaza elwa noKing Vajiralongkorn waseThailand, inkosi enoburhalarhume nenogonyamelo olawula ngokoyika nokumoyikisa ngoncedo lwabalingane bakhe emkhosini.
Ukumkani oneminyaka engama-67 ubudala waba ngukumkani ngonyaka ka-2017 kodwa uchitha ixesha elininzi eThailand. Kwiminyaka eliqela uchithe ixesha lakhe elininzi kwiGrand Hotel Sonnenbichl kwidolophu yaseJamani iGarmisch-Partenkirchen, kunye neqela labasetyhini abangama-20 kunye neqela labasebenzi abangaphezulu kwe-100 kunye namagosa ebhotwe.
Uninzi lwabasetyhini kwi-harem yakhe kunye nabasebenzi kwigqiza lakhe bangamabanjwa eJamani. Abafuni kukhonza iVajiralongkorn kodwa abanakho ukukhetha. Imithombo esebenzela inkosi yaseBavaria ithi abasebenzi abangamkholisiyo babethwa rhoqo kwaye bababethwa ngoonozinti beVajiralongkorn njengesohlwayo. Ukubetha kwenziwa ifilimu kuba iVajiralongkorn iyakonwabela ukubukela ividiyo yabantu ababandezelekayo.
E-Thailand, inkosi imise inkampu yejele kunye nezohlwayo kwenye yezigodlo zayo. Amagosa namagosa asemkhosini angathunyelwa apho kangangeenyanga ngenxa yezikrelemnqa ezincinci. Baphethwe, babethwe kwaye baphathwa gadalala, ngemiyalelo yeVajiralongkorn.
Kwiminyaka yakutshanje, ubuncinci abantu abathathu abasebenzela inkosi beswelekile. Ibhotwe libanga ukuba bobabini bazibulala kwaye owesithathu wabulawa sisifo segazi, kodwa kuyaziwa ngokubanzi ukuba bobathathu bathuthunjiswa kwaye babulawa.
Ukusukela ngonyaka ka-2016, abalaseli abalishumi abathandayo kulawulo lwentando yesininzi ababefuna ukugxothwa phesheya babulawa. Kukho ubungqina obugqithisileyo bokuba babulawa ngamajoni aseThailand athobela imiyalelo evela eVajiralongkorn.
Ukumkani ungaphezu komthetho eThailand, okwazi ukwenza ngaphandle kokugwetywa. Umgaqo-siseko umnika amandla apheleleyo kwaye akukho mntu unokuzisa izityholo zoluntu okanye zolwaphulo-mthetho.
Ukhuselwe kwaye uxhaswe ngamajenali e-Ultra-asebukhosini abakhokela imikhosi yaseThai yomkhosi. Njengobukhosi, umkhosi waseThailand ulutshaba lwedemokhrasi. Kule nkulungwane idlulileyo umkhosi uxhaphe amandla kangangezihlandlo ezili-12 kwimikhosi yezomkhosi, kwaye ihlala ingena kwezopolitiko. I-Thailand ayizange ikwazi ukuqhubela phambili inkululeko yedemokhrasi, kuba iikumkani kunye nomkhosi baye benza iyelenqe lokujongela phantsi ezopolitiko. I-Vajiralongkorn inomyalelo ocacileyo wamajoni oNogada baseKing 50,000 eThailand ukuba atyhoboze nakuphi na ukungavisisani.
Amaxesha amane kwimbali yanamhlanje yaseThailand - ngo-1973, 1976, 1992 nango-2010-umkhosi waseThailand ubulale abantu abebekade beqhankqalaza ezitalatweni zase Bangkok bafuna inkululeko. Umkhosi ubulale abantu abangakumbi baseThai kunokuba kunjalo owabulala amajoni angaphandle emfazweni.
UVajiralongkorn ngoku kumtshato wakhe wesine. Wamlahla wamhlazisa umfazi wakhe wokuqala emva nje kokuba betshatile, kwaye ekugqibeleni bahlukana naye. Umfazi wakhe wesibini wagxothwa eThailand kunye noonyana besi sibini ngo-1996. Waqhawula umtshato nenkosikazi yakhe yesithathu ngo-2014, emnyanzela ukuba aqhubeke nokuhlala endlini kwaye aqalise ukucocwa kocwangco kusapho. Abazali bakhe, abantakwabo abathathu, udadewabo, umalume wakhe kunye nezinye izalamane ezininzi bavalelwa.
UVajiralongkorn utshatele ukumkanikazi wakhe wangoku kunyaka ophelileyo, kodwa kunqabile ukumbona, bekhetha ukuchitha ixesha elininzi kunye nomakazi wakhe eGrand Hotel Sonnenbichl, ngelixa unkosikazi wakhe ehlala kwihotele kwidolophu yaseSwitzerland e-Engelberg.
I-Vajiralongkorn yeyona nto ityebileyo ngobukumkani emhlabeni, kunye nethamsanqa lomntu elingaphezulu kweebhiliyoni ezingama-50 ezigidi. Kodwa obu butyebi abonelanga kuye - nyaka ngamnye ufuna isixa esikhulu kuhlahlo-lwabiwo mali lukarhulumente, oluxhaswa ngurhafu weThai. Kulo nyaka inkosi ihlawulwa ngaphezulu kwe-815 yezigidi zee-euro ukusuka kuhlahlo-lwabiwo mali lweThai.
Abantu abaqhelekileyo banqwenela kwaye babulawa yindlala njengoko ubhubhani we-covid-19 udlula kulo lonke elaseThailand kunye nehlabathi, ngelixa lo kumkani uhlala e-Grand Hotel Sonnenbichl, echitha imali eninzi yirhafu, kwaye ehlukumeza i-harem yakhe kunye nabasebenzi. Abasebenzi abethwe kwaye baphathwa gadalala, bangoyiki ukuya kumapolisa aseJamani, kuba boyika ukuba iintsapho zabo emva eThailand zizojongwa ngembuyekezo.
Uninzi lwe-thais lubazi kakuhle ubugwenxa kunye nokukhohlakala kwenkosi yabo, kodwa amazwi abo athulisiwe yimithetho yedraconia. Nabani na ogxeka ubukhosi bujongana nobukumkani iminyaka.
AyingobaseThais kuphela ababandezeleka ngenxa yeNkosi Vajiralongkorn. Ungumthwalo kwirhafu yaseJamani, kuba urhulumente kufuneka ehlawule ukhuseleko kunye naye. Wenza kakubi amalungelo oluntu kumhlaba waseJamani- ukushushumbisa nokuxhaphaza abafazi, kwaye ubaphatha gadalala abakhonzi bakhe awabaphatha njengamakhoboka. AmaJamani akufuneki ayinyamezele le nto yenzeka kwilizwe labo.
Kungenxa yeso sizathu abalwela inkululeko yeThai bexhasa iPixelHELPER ukuba ithathe inyathelo.
Sifuna ukuba umhlaba wonke wazi ngenkohlakalo kunye nenkohlakalo yaseVajiralongkorn.
Sifuna ukuba ayeke ukuhlukumeza abantu baseThai.
Sifuna iJamani imkhuphele ngokwaphula imithetho emininzi.
Sifuna ukuba ajongane noThailand ngamatyala akhe.
Kwaye asiyi kuyekisa iphulo lethu ade abuyele ekhaya ukujongana nomthetho.
Ukuba uyasixhasa, nceda wabelane ngomyalezo wethu, kwaye nceda unikele kwiPixelHELPER kwiwebhusayithi yethu: https://pixelhelper.org/en/hilfe/
Sisonke, sinokuthi siwuphelise ulawulo luka-Vajiralongkorn loyika, kwaye sizise idemokhrasi yokwenene eThailand.
Ukuqikelela ukukhanya kwi-Townhall yeGarmisch Partenkirchen
Ingxowa-mali yokukhusela inkululeko yaseThai - siyabuphelisa ubukhosi eThailand Agasti 29th, 2021Oliver Bienkowski